Izindlu e- Treefort - I-Airbnb
Izindlu e- Treefort
Seward, Alaska, i-United States
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Beach House Alaska Seward
U-90% wezivakashi zakamuva unikeze u-Beach House Alaska Seward izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Ikhaya lesitayela sase-Alaskan, i-Treefort House enamagumbi amabili okulala ifaka ingaphakathi lezinkuni lemvelo, namafasitela ezithombe akwenza uzizwe uyingxenye yehlathi. Izitebhisi ezithandelayo eziyingqayizivele ezenziwe ngesihlahla esisodwa ziholela ekamelweni eliphezulu, elinombhede olingana nenkosi (namafasitela avumela ilanga laphakathi kwamabili-alungiswe!).
Igumbi lokulala elingaphansi linombhede wendlovukazi futhi igumbi lingaba mnyama ukuze kulale. Kukhona indawo yokulala kasofa wendlovukazi kanye ne-futon eyodwa egumbini lokuhlala/ikhishi. Ikhishi lihlome ngokugcwele ngamabhodwe, amapani, izitsha nezitsha, kanti nendlu iphinde ibe nendlu yokugezela egcwele. Ikhabethe liwuhambo olufushane oluya ebhishi lomphakathi kanye nezindlela zokuhamba izintaba.
Izivakashi zingajabulela ukusetshenziswa kwendawo yepikiniki, ene-barbecue grill kanye nomgodi womlilo. I-crib nesango lezingane nazo ziyatholakala uma kudingeka.
(Sicela ukuthi izivakashi ezihlala kule ndlu zibuke isikhathi esithule ngemva kuka-11pm. Kunefulethi elincane lestudiyo ngezansi kwale ndlu eliphinde lisetshenziswe njengendawo yokuqasha futhi umsindo ungadluliswa. Ngiyabonga!)
4.75 · 44 okushiwo abanye
Ibungazwe ngu-Beach House Alaska Seward
Hlola ezinye izinketho ezise- Seward namaphethelo